I-China Posture Corrector J09 yokukhiqiza kanye neFektha | I-Hongzhu
Okokusebenza Neoprene, Nylon Neoprene
Umsebenzi Ukulungiswa kokuphefumula, ukuphefumula emuva
Isici Iyaphefumula, ihlala isikhathi eside
Umbala Mnyama, luhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, noma okwenziwe ngokwezifiso
I-logo I-logo eyenziwe ngezifiso
Ama-brural postural kufanele agqoke amahora angama-3-4 ngosuku. Vele imizuzu engu-15-25, bese ufaka imizuzu engama-20 ngosuku. Umhlane namahlombe akho kuzolunga kancane, futhi uzokwakha inkumbulo yemisipha yokuma okufanele. Gwema ukuqinisa ngokweqile ukugwema ukungezwani ngokweqile. Akukaze kube umqondo omuhle ukugqoka isikhundla sokusekelwa isikhathi eside. Ingasetshenziswa kuphela njengethuluzi lokuqeqesha ukukusiza ekutholeni kabusha ukuma kwakho okujwayelekile. Amaqondile we-posture awahloselwe ukugqokwa, ngakho alimaza kakhulu kunokuhle. Ukuxhaswa okungaguquguqukayo emuva ngamaphampu we-lumbar kusiza ukunikeza ukukhululeka ekulimaleni futhi kukugcine uqhubeka. Kunconywe ukusiza ukudambisa izinhlungu zokungezwani emuva kwe-back, sprain kanye nemisipha yemisipha. Le brace ye-posture ntofontofo iyindlela ebiza kakhulu yokuvimbela ukuthambeka nobuhlungu obungapheli obuhambisana nayo. Imichilo nemichilo iguquguqukayo ngokuphelele, ikunikeza ukulingana okuqondile kokubumba komzimba wakho ukuze uthole induduzo efanelekile, otuswa ukuba uyigqoke engaphansi kwengubo. Siyethemba ukuthi uzothandana nalo mkhiqizo futhi siyathemba ukuthi uzoba nawo maduze, awenelisekile ngawo noma yizingubo zekotini.
Esedlule: Indawo Yokulungisa Yokubopha J05
Olandelayo: Ukulungisa isimo sokuphatha J10
I-Back Brace Posture Corrector
Isilondolozi Sokubuyela Emuva
Ukulungiswa Komzimba Womzimba
Idivayisi yokulungisa isimo
Ukuzilolonga Kwesimo Sezingane
Ukulungiswa Kwesimilo Kwabesifazane
I-Posture Corrector J03
Indawo Yokuhlaziya Yama-J01
Indawo Yokulungisa Yokubopha J05
I-Posture Corrector J02
Ukulungisa isimo sokuphatha J12